Awazi yini ukunikeza umndeni lapho umntwana azalelwa khona? Misa okukhethayo esitulweni unyakazisa. Umama nengane bayokwazisa isipho sakho ngokuqinisekile. Rocking isihlalo izingane, noma Chaise longue, njengoba ibizwa, isakhiwo ephathekayo ngendlela kwesitulo. Kuyoba kakhulu lula abasha ukunakekelwa unina ngomntwana. Izinzuzo main zidinga sunbeds ukuthi ukhulula isandla owesifazana, akuzange kudingeke ukuba unyakazisa njalo iphethe ingane. Uzokuthatha sihambe ingane naye ukuze ekhishini, lapho ezolile umpheki kwakusihlwa, ngenxa yezizathu ukuba ungakhathazeki - izinyane naye, uyalala noma udlala kusofa ukhululekile.
Ngo okukhethekile ezitolo noma inthanethi has a Ukukhetha ocebile izihlalo unyakazisa. Ngaphambi ukuthenga kwakho, ukuqoqa lonke ulwazi mayelana nesimo esikuso njengamanje. Ngakho, ungakwazi ukhethe best. Amathiphu ambalwa kuzokusiza ukuba wenze isinqumo esifanele.
Rocking isihlalo izinsana kufanele kube njengoba ephephile. umklamo okusimeme kanye ibhande (amathebhu esithambile) ngeke avumele ingane ukuba iwe kwesitulo futhi alimale. Plastic Uhlaka ukuzamazamisa akusho ezinokwethenjelwa e abazali, ngakho uthanda metal. Ukuthembeka abaxhumene futhi izibopho Akufanele futhi kube ungaqiniseki. Isihlalo kumele kube kulula ukuyisebenzisa futhi kulula ukuyiphatha.
Ukuze Usana akakwazi ukuba zibambe, into elungile kuyoba ukukhetha esihlalweni unyakazisa ne isihlalo anatomically lesifanele. izakhi ngokwesekala ikhanda kanye ukhalo, efakwe esihlalweni lounge, kuyoba a plus elikhulu.
Ngokuvamile, imikhiqizo efana eyenzelwe isisindo ingane kusuka 3 kuya 13 kg. Kodwa kungcono ukuhlola ukuthi hlobo luni isisindo nobudala esihlalweni yakhelwe. Okudala ingane esihlalweni is kangcono ukulawula isimo.
esihlalweni Amatebhe izinsana ukukhulisa ukuphila komkhiqizo. Ngakho, imodeli engabizi has endaweni eyodwa - sokulala, futhi izosetshenziswa kuphela lulling ingane. Nakani kwesitulo unyakazisa, ifakwe Regulator of ezifundazweni eziningana - "ukuphumula", "iphupho", "yokudla".
rocker ngamunye has ukupheda, kodwa ngamunye esikhiphekayo. Kuyodingeka ukuba wageza njalo, ngakho bheka esihlalweni unyakazisa ngekhava esikhiphekayo. Ngokuphawulekayo, uma senziwa lendwangu zemvelo, ezifana ukotini noma Calico.
Perfect unyakazisa usana ukala kancane. Kulula ukuba baphathe ezungeze endlini, nihambahambe noma ukuvakashela.
Abanye onobuhle anemisila ezihlukahlukene izesekeli eyengeziwe kanye namadivayisi. Rocking ifakwe kombhede Ukugunda sishaywe lapho kushisa khona. A amabhulokhi omculo futhi umdlalo arc ukubungaza ukuvusa ingane.
Electronic esihlalweni unyakazisa ifakwe eziningi yokusebenza izindlela - vibration okuthambile, okushelelayo isicanucanu. On brand onobuhle uhlelo lobunikazi esiyingqayizivele - kuncike isisindo ingane, uhlelo uqaphe ijubane futhi vibration.
Akufanele bachithe imali nezihlalo eqolo. Njengoba umama waqaphela wajabulela unyakazisa, uwagcine izingane eziye zafunda ukukhasa, kumane nje akunakwenzeka.
Izingane kakhulu othanda vibration futhi zithonye, ngakho lapho ingane ikhula, ungakwazi amnike esinye injabulo liyaphambuka - ihhashi, isibonelo. Wezingane amathoyizi ukuzamazama manje funa kanye yekhulu nesishiyagalolunye.
Izinhlobo scarves: imfashini izesekeli
Indlela ukukhetha mixer endlini? Mixer ekhaya: intengo, ukubuyekezwa
Blinds: yini nokuthi ukukhetha
Hlunga i aquarium - isiqinisekiso lobuhle induduzo ekhaya ukuze izindlu inhlanzi
Ugwayi Al Fakher: kunganjani uyithenga kuyinto yakhe
Mangaki ama-calories ku iklabishi?
Amaholide e-Rhodes: amathiphu kanye namacebiso okuhamba
Ubani okhokhela intela kwezokugembula?
Okwavelela izwe yemvelo - arrowroot. Ukunakekela, ukutshalwa, zizalela.